Nezvedu - Qingdao Heritage Chikafu Co., Ltd.
A Professional Dehydrated Fruits Mugadziri uye Anotengesa kunze
Qingdao Heritage Chikafu Co, Ltd. yakavambwa muna 2014, iine guta rakanyoreswa remamiriyoni makumi matatu euan, rakafukidza nzvimbo yemamirimita mazana matatu emamirimita uye huwandu hwekudyara hwemamiriyoni mazana mashanu emari. Icho chibereko chakaomeswa chakaomeswa, michero yakachekwa uye jamu kunze kwenyika kugadzirisa bhizinesi inosanganisa RD, kugadzirwa uye kutengesa. Iyo ine nhanhatu mbishi zvinhu zvigadziko zvakanyoreswa necododo yekuongorora Bureau. Iyo kambani ine goho repagore rematani mazana matanhatu emichero yakaomeswa michero, Kambani yakapasa SC, HACCP, BRC, kosher, ISO22000, SMETA, UL, kukwidza (Social Responsibility) system certification uye FDA kufaira.
Zvigadzirwa zvinonyanya kutumirwa kuUnited States, Japan, Europe nedzimwe nyika dzakasimukira, vozova dzimba "Baicaowei", "Qiaqia", "Miss" uye mamwe akawanda akanyorwa makambani eOEM emakambani.
Qingdao Heritage Chikafu Co, Ltd. yave iri nyanzvi mumunda wekugadzira michero isina mvura pamusoro pemakore makumi matatu.
Chinangwa chedu ndechekupa chakakodzera chigadzirwa nemutengo unonzwisisika kune vese vatengi vedu. Heritage Chikafu masevhisi pasirese network yevatengi vanopfuura nyika makumi maviri. Isu tinopa yakavanzika chitaridzi uye yakamisirwa michero yakaomeswa.
Isu tinoshanda kurerutsa maitiro nekukurumidza kupindura kune zvese zvinonetsa; ita shuwa kuti iwe unogona kutaurirana nesu zviri nyore uye zvakanaka.
Isu tiri mugadziri uye kunze kwenyika kwemichero isina mvura
Chii chatingaitira iwe?
Chikafu cheNhaka chiri muQingdao guta, mukati me1 awa yekutyaira kubva kuQingdao Airport. Inovhara nzvimbo inokwana 28,646 mativi emamirimita, yakavaka 18,000 mativi emamita enzvimbo yemazuva ano yekugadzira chikafu. Isu tiri nyanzvi yekugadzira nekutengesa michero yakaomeswa.
Isu tinogadzira yakaderera hunyoro uye yakaderera shuga Yakadzimwa Mandarin Orange, Apple, Strawberry, Kiwi, Cantaloupe, Peach, Apricot, uye Ropa Orange.Whole / Chunk / Slice / Dice.
Kugadzikana kupihwa. Yakagadzikana mhando. Mutengo Unonzwisisika. Yakanaka kwazvo inonaka. Yakareba uye yakagadzikana sevhisi. Vandudza mhinduro dzekushambadzira uye gadzira zvakakwana kubatsirwa pamwe newe. Chikafu cheNhaka chinogadzira chigadzirwa chinoteedzana system ne "kambani + base + varimi + musika". Yedu ine simba R & D timu inopa zvinhu zvitsva kuti ive nechokwadi chekukwikwidza pamucheto nguva dzese.
National High Tech Mabhizinesi.
"Matatu matatu" ekuratidzira bhizinesi reHurumende Kutungamira kwekuongorora kwezvinhu.
China chikafu goridhe brand.
Ari kutungamira mabhizinesi ekuderedza hurombo muShandong Province.
Makiyi anotungamira emakambani ekurima maindasitiri mudunhu reShandong.
Shandong Province akasimbiswa zvebhizimisi michina centre.
Qingdao yakatendeka bhizinesi.
Isu tine maviri mahunyanzvi nyanzvi kubva kuThailand ane anopfuura makumi matatu emakumi emakore experence. Uye chiremba wedu chiremba kubva kuTaiwan anopfuura makore makumi manomwe. Chikwata chedu chakanaka pakuvandudza nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva nehupfumi hwavo. Isu tinobhadhara kukosha kukuru kune iro R & D dhipatimendi uye neDhipatimendi reKugadzira. Hunhu hwakanaka, yakakodzera sevice, hukama hwakanaka nevatengi vedu uye vatengesi ndizvo zvakakosha zvinhu kwatiri.
Isu tinoshandisa yakakurumbira mbishi zvinhu kuona mhando. Mazhinji emichero yedu anobva muzvigadzirwa zveGeographical Indication. Michero yedu isina mvura ine mhando yakanaka, hunyanzvi hwetekinoroji, inopokana nemuedzo wemusika uye zvinosarudzika zvevatengi. Isu tinoshandisa Thailand yepamusoro-soro tekinoroji kuburitsa michero yakaoma yechando muChina. Michero yakanyikwa mune yakadzika-tembiricha manyuchi, simbisa iyo acidity uye yakakosha Inonhuhwirira, uye yakasarudzika flavour.
Iwo makuru zvigadzirwa: Akashayiwa mvura Mandarin Orange, Apple, Strawberry, Kiwi, Cantaloupe, Peach, Apricotand Ropa Orange.Whole / Chunk / Slice / Dice.
Tine zvitupa zveHACCP, BRC, KOSHER, FDA, SEDEX, ISO 22000, uye Elevate.
Yedu kiyi Hunhu Huri kusanamatira, Clump yemahara, Yakadzika sarufa, Yakadzika mwando, Yakadzika shuga. Yakanaka uye Sour.
Saka iwe unofanirwa kutaurirana nesu nekutitumira maemail kana kutifonera kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu